Programmer's Diary: သတ်ပုံမှားတဲ့ည
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 4:34 PM
Thanks Nyi Nyi, it may very useful for me :)
February 19, 2007 5:19 PM
Thank You so much and very useful advice.
Hope that all Myanmar Bloger using myanmar fonts will check their own.
Thanks so much Ko NyiNyi. I've bookmarked the link.
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းဆိုတာ လိုချင်နေတာ အတော်ပဲ။ တစ်ခြားကျမ်းတွေလည်း ရှိဦးမယ်ထင်တယ်နော်။
March 08, 2007 1:26 AM
myth59 >> တခြားဖတ်လို့ အသုံးဝင်မယ် ထင်တာလေးတွေ နောက် ကြုံရင်ကြုံသလို တင်ပါဦးမယ်ဗျာ.. အခု ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် တင်ပေးထားပါတယ်..
all >> အားလုံး သတ်ပုံမှားတဲ့ညတွေ နောက်နောင်မကြုံကြစေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ.. အခုလို လာအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..